लेखराज भट्टको निवासमा विप्लवसँग माओवादी परित्याग गरेका एमाले नेताहरुको भेटवार्ता ! – Enepali Samchar
लेखराज भट्टको निवासमा विप्लवसँग माओवादी परित्याग गरेका एमाले नेताहरुको भेटवार्ता !
July 18, 2021 adminLeaveaComment on लेखराज भट्टको निवासमा विप्लवसँग माओवादी परित्याग गरेका एमाले नेताहरुको भेटवार्ता !
enepaalisamchaar // काठमाडौं, । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले पछिल्लो साता आफूलाई राजनीतिक भेटवार्तामा सक्रिय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएकै दिनदेखि उनले आफूलाई सक्रिय बनाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगबाट सुरु भएको भेटवार्ता माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्यपछि उनले माओवादी केन्द्र परित्याग गरि एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुसँग पनि आज छलफल गरेका छन् । आज लेखराज भट्टको निवासमा पूर्व माओवादी नेताहरु गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् ।
उक्त छलफलमा भट्टसहित नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साहसले विप्लवसँग छलफल गरेका हुन् । उक्त छलफलमा विप्लव कापी र कलमसहित केही टिपोट गरिरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौं, । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले पछिल्लो साता आफूलाई राजनीतिक भेटवार्तामा सक्रिय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएकै दिनदेखि उनले आफूलाई सक्रिय बनाएका छन् ।
आजबाट एमाले औपचारिक विभाजन, हस्तीहरु को कता (पुरा विवरणसहित)
बादललाई हराउँदै देवकोटा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीले किन बोलाए सुरक्षा परिषद बैठक
भोलिबाट जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने(पुरा जानकारी )